Azonao atao ve ny manampy ahy hahita fiverenana PR ambony amidy?
Tsapako fa tsy mora mihitsy ny mahita ny toerana tsara sy azo antoka ahafahana mivezivezy amin'ny atin'ny PR. Ary mazava ho azy, saika tsy azo tanterahana ny manangana rindran-damina ampy amin'ny High Domain Authority, PageRank, ary ny pejy ho an'ny pejy maoderina - amin'ny fomba voajanahary, tsy misy karama.Ampiasao tsara, amin'ny fampiasana loharanom-baovao tsotra fotsiny mba hahazoana rindran-damina tsara tarehy manondro ny tranonkala web na ny blôginao. Ary manana andianà toerana ho anao aho hahita trondro avo lenta ho an'ny varotra - antenaina fa ny kely indrindra dia mety hampidi-doza hiditra ny sazy mihatra amin'ny Google - ejector calculation.
Toerana mahazatra amin'ny High Backlinks PR amin'ny vidiny
Tsy ilaina ny mandany ny fotoanao hanomezanao izany fampahatsiahivana mampihetsi-po izany - Ho fanandramana tena mampidi-doza. Izany no mahatonga ahy etsy ambany hampiseho aminao ny toerana azo antoka sy azo antoka kokoa na tsy misy toerana azo antoka. Raha toa ianao matoky tena (na tsy mitandrina - iza no mahalala?), Eto dia azonao atao ny manome vahaolana amin'ny SEO anao - farafaharatsiny raha tsy manangana saina mena miaraka amin'i Google avy hatrany.
Link Management - ity loharano ity dia azo soloina ho safidy tsara indrindra hanandramana voalohany amin'ny famoahana backlinks vola amin'ny kalitao toa voajanahary mba hampitombo ny sehatra SEO anao. Azonao atao ny mahita toerana malalaka amin'ny rohy samihafa miaraka amin'ny karazana DA, PA, ary PageRank. Fanamarihana, raha toa ka tery loatra ny teti-bolanao, ity safidy ity dia ny safidinao tsara indrindra - manolotra sarobidy mora indrindra amin'ny vidiny amin'ny faritra hafa ampiasaina-voaporofo ho an'ireo backlinks PR ho an'ny fivarotana.
Black Hat Links - no toerana faharoa tsara indrindra hividianana rindran-damina roa miisa roa na mihoatra ny vola miditra amin'ny ampahany ary amin'ny fihenam-bidy vidiny. Fa manoro hevitra aho raha mieritreritra an'io loharanom-pivarotana rindrambaiko voavidim-bola io raha toa ka vonona ny hividy rohy 50-60 raha kely indrindra. Ary ny tena endriny manokana amin'ity toerana ity dia saiky ny backlink izay afaka mividy ao dia miaraka amin'ny AttFollow attribute misy.
Fiverr - na dia eo aza io tranonkala io dia fanta-daza amin'ny marketing marika nomerika sy ny vondrom-piarahamonina ara-barotra afrikana dia mbola afaka ny ho safidy tsara ho an'ireo izay mitady hohozongozonina ambony PR. Mariho anefa fa ny Fiverr dia hahatonga fandrosoana mety amin'ny SEO raha tsy ampiasaina tsara. Midika izany fa maro loatra ny fitaovana maoderina misy ao, ka tsy tokony hivezivezy ianao mba hahazoana rohy maro araka izay azo atao. Tsarovy fa ny fampiasam-bola haingana amin'ny fifandraisana amin'ny rohy dia ho hita fa mampiahiahy mandrakariva eo imason'i Google.
Backlinks Hub - no safidy farany sahy manome torohevitra miezaka mividy bakolava tsara ho an'ny SEO. Anisan'ireo lafiny matanjaka indrindra ny fiantohana isan-taona amin'ny alàlan'ny backlink isan-karazany novidina tao amin'ny Backlinks Hub. Ary toa loharanom-pahalalana bebe kokoa izany loharano izany fa tsy ny vidiny. Na izany aza dia mety ho toa somary mitongilana be ny sarim-panafarana iombonana.